DEG DEG:- Dagaal aad u xoogan oo haatan ka soconaaya deegaanka Luuq-jeelow ee gobolka Hiiraan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Dagaal aad u xoogan oo haatan ka soconaaya deegaanka Luuq-jeelow ee gobolka Hiiraan
Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in dagaal aad u xoogan uu haatan ka soconaayo deegaanka Luuq-jeelow ee duuleedka magaalada B/weyne, iyadoona dagaalkaasi la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan.
Dagaalka ayaa sida la sheegay bilawday kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa militeriga Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay weerar xoogan ku qaadeen deegaanka Luuq-jeelow ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada Xarakada Al-shabaab.
Labada dhinac ayaa waxay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana dagaalkaasi la sheegay inuu xoogiisa ka soconaayo duuleedka galbeed ee deegaanka Luuq-jeelow ee gobolka Hiiraan.
Ilaa iyo haatan lama oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi, inkastoo aynu isku daynay inaa xiriiro la sameeyno saraakiisha dowladda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan, balse ay inoo suurto galin.
Deegaanka Luuq-jeelow ayaa horay waxaa gacanta ugu haayay Xarakada Al-shabaab, balse illaa haatan lama oga cidda sida rasmiga ah ula wareegtay, maadaama uu weli halkaasi ka soconaayo dagaalka.
Dhawaan ayay ahayd markii dowladda federaalka Soomaaliya ay shaacisay in dagaalo sedax geesood ah ay ku qaadi doonto deegaanadda ay gacanta ku hayso Xarakada Al-shabaab, iyadoona ilaa iyo haatan aan kala caddeyn in weerarada ceynkaasi oo kale ay sii socon doonaan iyo inkale.